Luz de Maria-Lungisa Amakhaya Akho-Ukubalwa usiya eBukumkanini
ISt	NguLuz de Maria de Bonilla NgoJanuwari 25th, 2021:
Bantu abathandekayo bakaThixo, njengeNkosana yoMkhosi waseZulwini endithunyelwe ukuba ndivakalise kuwe: Uyathandwa ngeyona Ngcwele ingcwele kunye neKumkanikazi kunye noMama wexesha lokuphela. Funda ngoKumkanikazi noMama wexesha lokuphela onomfanekiso omele into abangamele bayilibale abantwana bakaThixo ngeli xesha. Njengabantwana abazalelwe emnqamlezweni, ninxibe umfuziselo woMnqamlezo, ongamele ukuwulahla nanjengoko usindiso lomntu lubonakala ngaphakathi kulo. LuThando lukaKrestu olunikwa abantwana bakhe ngoMnqamlezo kwaye ngenxa yoko ngoKumkanikazi noMama weXesha lokuPhela.
Abantu abathembekileyo bayekile ukuba njalo ngenxa yemvukelo ngokuchasene neMiyalelo yoMthetho kaThixo, ukugqwethwa kwabo kunye nezono ezininzi ezijikeleze abantu bade babe ngabakaMtyholi, kwaye ke, basebenze kwaye benze njengabantwana kude noTata wabo. . Ulindele ukuba uvuzwe ngento ongakufanelanga; ufuna ukuqhubeka uphila ngendlela owawuphila ngayo ngaphambi kokuba imikhosi kaSathana ithathe iingqondo zabantu kwaye iqaqadekise iintliziyo zabo. Akusayi kuba njalo; Nabani na onethemba lekamva elingcono ubeka ithemba labo kwilizwe labo, ngaphandle kokuqonda ukuba luguqulwe kangakanani lonke uluntu.
Ukusukela kudala, iingcinga ezintsha zithathe indawo yoluntu; iguqulwe yaza yasuswa kuKumkani wayo nakwiNkosi uYesu Krestu ukulungiselela eli xesha xa, ngale ntsholongwane, abantu abaphezulu behlabathi bazityhile - abantu abakhethekileyo abangoyena mntu ngaphandle kokumela uMchasi-Kristu, lowo uya kuba uzwilakhe, umngcatshi, umkhohlisi kunye nomnini wemiphefumlo yabo bazinikezela kuye.
Yoyika, ewe - yoyika ukuphulukana nosindiso olungunaphakade! Zixhalabise ngokuba ngcono ngalo lonke ixesha: qonda ukuba kwinto esondelayo, nokuba inzima kangakanani eluntwini, uya kuphumelela kuphela ngesandla seNkosi yethu neNkosi uYesu Krestu… kungenjalo uya kuba lixhoba elilula Umchasi-Kristu ngokwakhe.
Ndiyabiza ke ngoko abantwana bakwaZiqu-zintathu eziNgcwele ukuba bathathe isigqibo sokusindisa imiphefumlo yenu, balibale imihla ebenikulinda ngayo ngobudenge, ngaloo ndlela bechitha ukukhula okuqhubekayo emoyeni, kwaye ndinibiza ukuba nibe ngabantwana abangcono nabakhulu boThixo Ophilayo, UThixo oyinyani, eqinisa ukholo lwakho kungekuphela ngomthandazo kodwa ngolwazi. Abantu bakaThixo babesela, badla ixesha labo; Baye baqhubeka nokujonga ecaleni okwenzekayo ngalo mzuzu, kwaye kungekudala bazakufumana befumana iintlungu ezinzulu zokuba bazizithulu kwiminxeba yokuzilungiselela emoyeni, ukutshintsha ubomi babo, ukuvuselelwa ngokomoya nokulungiselela ngokwezinto ezibonakalayo kangangoko.
Uyilo lukaThixo luyaqhubeka. Bangaphi abantu abaza kugweba uThixo ngokuvumela ukuthanda kwabantu! Indebe iyaqhubeka igalelwa; kusele okuncinci kuyo, ukanti ukungathobeli komntu kuyaqhubeka ngaphandle kwesibetho esiqhubekayo. Isohlwayo esikhulu ngakumbi ke siza kuluntu.
UThixo ufuna abantu bakhe bangalibali ukuba “Emlonyeni wakhe kuphuma ikrele elibukhali elibetha iintlanga. Uya kuzalusa ngentonga yentsimbi, yena ngokwakhe uya kunyathela esixovulelweni sewayini yomsindo neyengqumbo kaThixo uSomandla. ” (ISityhi. 19:15) Indebe yengqumbo kaThixo iya kugalelwa lonke uluntu, kwaye bangaphi abo abajika baba ngabagwebi bomsindo kaThixo kwaye bayigxothe? Kuyinyani ukuba kwiNkosi yethu noKumkani uYesu Krestu ingqumbo kaThixo yaneliseka. Kwangelo xesha, wonke umntu unoxanduva lwezono zakhe kwaye kufuneka alwele uguquko, intlawulelo, inguquko, kuba uThixo wenze into engenakwenziwa mntu okanye efaneleyo.
Yizani, bantwana bakaThixo, kwaye niguquke ngaphambi kobusuku kwesi sizukulwana sigwenxa. Thandaza ngexesha elililo nangexesha langaphandle; lungiselela ukujongana neemvavanyo oxhathiswe kuzo ngokholo, ukuqina nokuzimisela. Kuya kufuneka uthi hayi kwinto engeyoThixo kwaye ujonge ngaphaya kwamehlo akho. Ubuntu lixhoba lokungazi, linikezela ezandleni zotshaba, kwaye ulawulo lwehlabathi luya kulawula kwaye lucinezele.
Thandaza: umhlaba uya kunyikima ngamandla, kwamanye amazwe ngemvelaphi yendalo kwaye kwamanye ngenxa yenzululwazi esetyenziswe gwenxa kunye nengqondo yomntu engendawo.
Thandaza: abantu baya kuvuka, uqhankqalazo lomntu luyakwaliwa kwaye umntu avalelwe ukuze amlawule.
Thandazela ngakumbi iMexico, iUnited States, iPuerto Rico, iChile neJapan. Inyikima iya kubangela iintlungu.
NjengoMkhuseli waBantu bakaThixo, ndiqhubeka ndisilwa nemikhosi yobubi; Kunye neeNgelosi Zam siza kunigada ukuba inkululeko yenu iyakuvumela.
Kungxamisekile ukuba nizilungiselele njengentsapho apho niya kuhlala phantsi kweentlekele kwaye nihlale phi njengoluntu, ninesiqinisekiso sokuba asiyi kushiya nasiphi na isidalwa sikaThixo. Njengokapteni womkhosi wasezulwini, ndiphakamise ikrele lam kunye namandla endiwafumene kweyona Ngcwele ingcwele, ndabelana nawe ukuba ndingumkhuseli weendawo ezingcwele: ukuba amakhaya ayingcwele ndiya kubakhusela. Ukuba nindibuza ngamandla, ndiza kuninceda nizazi ngaphakathi kwaye ningalahli intando kaThixo. Ndingumkhuseli weentsapho: Ndiyabakhusela abo banqwenela ukugcina umlinganiso olungileyo kwiintsapho zabo. Uthando lwam lunemfesane. Ndingumkhuseli weCawa ethembekileyo kwaye ndilwa ukuze uMtyholi abaleke kwiCawa yeNkosi yam noThixo wam.
Ndiyakusikelela. Yandisa ukholo lwakho.
Umbono unikwe uLuz de Maria:
Bazalwane noodade, ngeli xesha leSibheno ngu-Saint Michael iNgelosi eyintloko, ndaye ndavunyelwa ukuba ndibone umbono olandelayo
Ndabona esinye isifo esele seMhlabeni kwaye siza kuqhubeka sinomsindo. Ngokukwanjalo, ndaye ndavunyelwa ukuba ndibone ukuba iinyikima ziya kubenzakalisa njani abantu. Ukuncedana kuya kuba nzima xa ujongene nokubandezeleka kwabantu. Ndabona iintlekele zisihla kwiNdebe egalelwa sisandla sikaBawo, esigcinwe nguMama wethu oNgcwele. Ndeva iimpuphu zokubetha kwamahashe athi, njengoko isiBhalo esingcwele sisixelela kwi-Apocalypse, ukuba ujikeleze umhlaba, ulinde umkhweli olandelayo ukuba anike umyalelo kwihashe lakhe ukuba ahambe.
Ndiyakumema ukuba ubhenele uMoya oyiNgcwele uMichael. Amen.
• Kwi "Ndebe Yomsindo": Ukugcwala kwesono: Ububi mabuzikhuphe
Ngokuphathelele "abakhweli bamahashe" beSityhilelo, bona eyethu Ixesha njengokuba sicacisa kwithebhu nganye intsingiselo "yamatywina" atyhola ihashe nomkhweli ngamnye.
• Funda: AmaTywina aSixhenxe oHlaziyo
Funda ngoKumkanikazi noMama wexesha lokuphela
← Abavukeli-Icandelo II
UPedro-Ubuntu buyagula →